သင့်ရဲ့ လုံခြှုံရေးအတွက် Facebook အကောင့်အတုများကို ရှာဖွေနည်း - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Facebook နည်းပညာများ သင့်ရဲ့ လုံခြှုံရေးအတွက် Facebook အကောင့်အတုများကို ရှာဖွေနည်း
သင့်ရဲ့ လုံခြှုံရေးအတွက် Facebook အကောင့်အတုများကို ရှာဖွေနည်း
Thiha Htike at 5:00:00 PM Facebook နည်းပညာများ,
Facebook အသုံးပြုသူအများစုဟာ Facebook Friend Request များစွာကို လက်ခံရရှိတတ်ကြပြီး စစ်ဆေးခြင်း မရှိဘဲ အလွယ်တကူပဲ Accept လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သင့်ရဲ့ Facebook မှ သူငယ်ချင်းအားလုံးဟာ Facebook ကို တကယ် အသုံးပြုတဲ့လူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ တစ်ချို့က လူတွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရယူပြီး လိမ်လည်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook က ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နာမည်အစစ်ကို အသုံးပြုဖို့ ကန့်သတ်ချက်တွေပြုလုပ်ထားသလို နာမည်ကိုလည်း လေးကြိမ်သာ ပြောင်းလဲခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Facebook ရဲ့ System ဟာ ရာနှုန်းပြည့် ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ Facebook က ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစား ကြိုးစား Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာ အကောင့်အတုများစွာ ရှိနေပါသေးတယ်။
အဲဒီ အကောင့်အတုတွေကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ အတွက် FakeOff ဆိုတဲ့ Third-Party Tool ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
FakeOff ကို အသုံးပြုနည်း
FakeOff က အကောင့်အတုတွေကို စစ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့ Facebook App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ FakeOff ၀က်ဆိုဒ်(https://apps.facebook.com/fakeoff/?fb_source=search&ref=br_tf )ကို သွားပြီး သင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ FakeOff က သင့်ရဲ့ Facebook သူငယ်ချင်းများ စာရင်းကို ရယူပြီးပြသပါလိမ့်မယ်။ သင်နဲ့ အမှန်တကယ် သိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ “ I know he/she is real” ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ အကောင့်အတုလို့ သံသယရှိသူတွေကို စစ်ဆေးဖို့ “ Let’s check him” ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ပြသပေးထားတဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းများ စာရင်းမှာ စစ်ဆေးချင်တဲ့ အကောင့်ကို မတွေ့ရရင် အပေါ်ထိပ်မှာ ရှိတဲ့ Search Box မှာ နာမည်ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
နောက်အဆင့်မှာတော့ Start Basic Investigation ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
နောက်အဆင့်မှာ မေးခွန်းအနည်းငယ် မေးပါလိမ့်မယ်။ သံသယရှိသူဟာ Celebrity လား? သင်နဲ့ Facebook ပြင်ပမှာ စကားပြောဖူးလား? သူ့ကို သိတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ? စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေကို ဖြေဆိုပြီးရင် “ Submit…. “ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ မေးခွန်းတွေကို မဖြေဆိုချင်ရင် “ Skip ….” ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
နောက်အဆင့်မှာတော့ Estimated Score မှာ ရမှတ်ကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညာဘက်မှ ဇယားကွက်မှာ ရမှတ်အလိုက် သူငယ်ချင်းရဲ့ အခြေအနေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ရမှတ် ၁ ကနေ ၄ အတွင်းဆိုရင်တော့ သတိထားသင့်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် Unfriend လုပ်သင့်တဲ့ သူငယ်ချင်း အတုအယောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရမှတ် ၅ နဲ့ ၆ ဆိုရင် သာမာန်ဖြစ်ပြီး ၇ နဲ့ အထက်ဆိုရင်တော့ စိတ်ချရတဲ့ သူငယ်ချင်း အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
FakeOff ကို အခမဲ့ အသုံးပြုရင် သင် စစ်ဆေးချင်သူရဲ့ ဆယ်ရက်အတွင်း လှုပ်ရှားမှုတွေကို အခြေခံပြီး စစ်ဆေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခပေး အသုံးပြုရင်တော့ သံသယရှိသူရဲ့ တစ်နှစ်တာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို စစ်ဆေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အခပေး အသုံးပြုရင်တော့ စစ်ဆေးမှု ရလဒ်က ပိုမို တိကျနိုင်ပါတယ်။
FakeOff ကို www.fakeoff.me မှာ ၁၄ ရက်ကြာ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Credit to http://mobilechannelteam.blogspot.com
ကျွန်တော့်ထံသို့ မေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ဖုန်းဆက်ပြီးဖြစ်စေ Mobile နည်းပညာများ မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း သိသလောက်ကို ဖြေပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ....
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့်ကို Message နဲ့ပို့ပြီးမမေးဖို့ အထူးပြောလိုပါတယ် .ဖုန်းဆက်ပြီးသော်လည်းကောင်း မေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ (only voice call & Email )
အမှန်တစ်ကယ်ပြောရရင် ပြန်ပို့ဖို့ပိုက်ပိုက်မရှိလို့ပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ရင် ဖုန်းဘေကဒ်လှမ်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ :P
Solidfiles Download Links
Advanced SystemCare Pro 8.1 Full Activated
Samsung Keypad_Schametic_Diagrams < A300/A400/A500...
ဟုတ်ကဲ့.. "ကိုသီဟထိုက်လား? "လို့မေးမြန်းထားသူတွေအတ...
Adobe Master Collection အတွက် Master Collection C...
စာပေဟောပြောပွဲ mp-3 ဖိုင်များ ( ၁၂ )
ရုပ်ထွက်အကောင်းဆုံးနဲ့ အသံထွက်အကောင်းဆုံး Power DV...
သင့်ကွန်ပျူတာကို လျင်မြန်စွာ အသုံးပြုလိုလျှင်
VRoot 1.8.0.12451 New Version For Windows
Android 4.4 ထိ Root နိုင်တဲ့ Every day Root 1.2 Be...
စာပေဟောပြောပွဲ mp-3 ဖိုင်များ ( ၁၁ )
ကျွန်တော့်အားမေးမြန်း ထားသော သူအားလုံးအားလုံးအတွက်...
စာပေဟောပြောပွဲ mp-3 ဖိုင်များ ( ၁၀ )
notepad ဖြင့် ကွန်ပျူတာIP address ကြည့်နည်း
G-mail တွေအကြောင်း နည်းနည်းလေ့လာရအောင်...
G-Talk ကနေ သီချင်း ဖွင့်ပြကြရအောင်
သင့်ဘ၀ အောင်မြင်ချင်ပါသလား ? ဒါဆိုအောက်ကစာဖတ်ပြီး ...
Mobile Hardware ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ တစ်စေ့တစ်တောင်...
ဆက်သွယ်ရေး Operator များ၏ Complain ဖုန်းနံပါတ်များ...
ကျွန်တော့်အား ဖုန်းဆက်ပြီးမေးမြန်းထားသော သူအားလုံး...
Huawei G730-U00 အတွက် မြန်မာစာပါပြီးသား S4 Flash T...
password တွေရဲ့ အဓိပါယ် နဲ့ လုံခြုံအောင် ကာကွယ်နည်...
စာပေဟောပြောပွဲ mp-3 ဖိုင်များ ( ၉ )
စာပေဟောပြောပွဲ mp-3 ဖိုင်များ ( ၈ )
စာပေဟောပြောပွဲ mp-3 ဖိုင်များ ( ၇ )
Khigo Root 1.3.0.2198 For Windows
Ascend G6-T00 Official Firmware B152
Glory Play 4X ( Che2-TL00H ) Official Firmware B263
Huawei glory64G ( H60-L21 ) Official Firmware B310
Glory64G ( H60-L12 ) Official Firmware B310
Glory64G ( H60-L11) Official Firmware B310
Huawei glory64G ( H60-L02 ) Official Firmware B310
Huawei glory64G ( H60-L01 ) Official Firmware B310
Glory Play 4X ( Che2-TL00M ) Official Firmware B262
HUAWEI G620-L72 B151 (Internal service use only)
GiliSoft USB Lock 5.1.0 Full Version
Gmail,Facebook Password တွေမေ့သွားပြီလားဗျ...(ပြန်...
မသိသေးသောသူများအတွက် Facebook A/C လော့ကျရှင်းတမ်း....
Min Oke Kar Domain ပြောင်းလဲသုံးစွဲခြင်း.... (www....
စာပေဟောပြောပွဲ mp-3 ဖိုင်များ ( ၆ )
Customer က internet software သွင်းခိုင်းလို့ဘာသွင်...
စာပေဟောပြောပွဲ mp-3 ဖိုင်များ-၅
ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္န ဟောကြားတော်မူအပ်သော ဘ၀ဖြောင့်ြေ...
စာပေဟောပြောပွဲ mp-3 ဖိုင်များ-၄
Huawei Network Unlock Tools ( 15 ) မျိုး Free Down...
စာပေဟောပြောပွဲ mp-3 ဖိုင်များ-၃
စာပေဟောပြောပွဲ mp-3 ဖိုင်များ -၂
စာပေဟောပြောပွဲ mp-3 ဖိုင်များ -၁
Huawei C8812-B918 ROM and CWM Batch Firmware < Bat...
Android ဖုန်းတွေမှာ Gmail အကောင့်သစ်ထပ်ဖွင့်လို့မရ...
အီဂျစ်ဘုရင်မာယာရှင် ( ကလီယိုပက်ထရာ ) - ဒဂုန်ရွှေမျှား
Xiaomi Mi 1/1S ကို Root ခြင်း
DVD slideshow show maker with background sounds.exe
Android ဖုန်း ဘာကြောင့် လေးလံလာရသလဲ...???
ဂျပန်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထုတ်ဝေခြင်း ခံခဲ့ရသော သွေး ( ...
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Rooting
Blog တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း သင်ခန်းစာ အပိုင်း (၁)(ကျွ...
သင့်ရဲ့ လုံခြှုံရေးအတွက် Facebook အကောင့်အတုများကိ...
Facebook ကို ခဏတာ Block လုပ်နိုင်မယ့် Tools လေးခု
Honor 3C Hol-U10 Myanmar Font Installer
recovery flash .bat ဖိုင်ရေးသားနည်း
(က) မှ (အ)ထိ အသုံးဝင်သော စကားပုံများ စုစည်းထားတဲ့ apk
အပျိုလမ်းညွှန် ( ပီမိုးနင်း )
မုန်း၍မဟူ ( ဂျာနယ်ကျော် မမလေး) ဝတ္ထု ( နိုင်ငံခြား ...
MediaPad M1 ( S8-303L) B003 Official Firmware and...
အာဒမ်၏ ဆာတေး ( အကြည်တော် ) ဟာသဝတ္ထု ( သေးထွက်အောင်ရ...